Ciise Masiix Waa la Dilay | Farriinta Kitaabka
Ciise Masiix Waa la Dilay
Ciise iid cusub oo isaga lagu xusuusto buu bilaabay. Waa la gacangeliyay oo geed baa lagu qodbay
SADDEX iyo badh sano markuu Ciise wacdiga iyo waxbaridda waday wuxuu gartay in waqtiguu dunida ku lahaa dhammaanayo. Diin hoggaamiyayaashii Yuhuudda waxay ku tashanayeen inay dilaan Ciise. Haddaba waxay ka cabsadeen inay rabsho dadka ka dhex kacdo waayo dadku waxay aamminsanayeen inuu Ciise nebi ahaa. Isla waqtigaana Shayddaankii wuxuu duufsaday Yuudas Iskariyod mid ka mid ah 12kii rasuul oo Ciise siduu u noqdo gacangeliye. Diin hoggaamiyayaashii Yuudas waxay siiyeen 30 gogoʼ oo lacag ah siduu Ciise u gacangeliyo.
Habeenkiisii ugu dambeeyay Ciise Iiddii Kormaridda buu rasuulladiisii la iiday. Markuu Yuudas iska diray dabadeed wuxuu bilaabay iid cusub oo la yiraahdo Cashada Rabbiga. Kibis intuu qaaday buu Ilaahay u mahadnaqay oo u dhiibay 11kii rasuul oo hadhay. Wuxuu yiri: “Tanu waa jidhkaygii laydiin bixiyey. Waxan xusuustayda u sameeya.” Koob khamri ahna sidoo kale buu yeelay oo wuxuu yiri: “Koobkanu waa axdiga cusub oo dhiiggayga.”—Luukos 22:19, 20.
Habeenkaas Ciise hadallo badan buu u hayay rasuulladiisii. Qaynuun cusub buu siiyay oo wuxuu ku amray inay isu jeclaadaan si aan xasidnimo lahayn. Wuxuu yiri: “Sidaasay dadka oo dhammi idinku garan doonaan inaad xertaydii tihiin, haddaad jacayl isu qabtaan.” (Yooxanaa 13:34, 35) Wuxuu u sheegay inaysan ka murugoon waxyaalaha naxdinta leh oo dhici doona. Ciise si dhab ah buu aawadood Ilaahay u baryay. Goortay gabyo ammaan ah ku gabyeen bay habeennimadii u baxeen.
Beertii Getsemane markay gaareen Ciise intuu jilbo joogsaday buu qalbigiisa oo dhan Ilaahay ku baryay. Waqti yar kaddib siday Ciise u xiraan waxaa yimaaday koox weyn oo hubaysan oo askar, wadaado iyo dad kale ka tirsan yihiin. Yuudas dhunkasho buu ku muujiyay kuu Ciise ahaa. Intay askartii Ciise xirxirayeen rasuulladii way kala carareen.
Ciise maxkamadda sare oo Yuhuudda hortooda buu ku sheegay inuu yahay Wiilka Ilaahay. Maxkamaddii waxay u qaadatay inuu caytamay oo Ilaahay been ka sheegay oona dhimasho istaahilay. Ciise waxaa loo kaxeeyay Bontiyos Bilaatos oo ahaa Taliye Rooma soo dirtay. Inkastuu Ciise eed ka waayay wuxuu u dhiibay kooxdii weynayd oo dhimashadiisa u qaylinayay.
Meel Golgota la dhaho baa Ciise la geeyay. Halkaas askartii Rooma baa geed ku qodbay. Si mucjiso ah maalin cad baa gudcur noqotay. Gelinkii dambe oo galabtaas Ciise wuu dhintay oo dhulgariir weyn baa dhacay. Meydkiisii waxaa la dhigay xabaal dhagax laga qoday. Maalintii ku xigtay wadaadadii xabaashiisii way adkeeyeen oo waardiyayaaal bay ku ilaaliyeen. Ciise qabrigaas muu ku jiri lahaa weligii? Maya. Mucjisadii ugu weynayd baa dhacday.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Matayos qaybaha 26 iyo 27; Markos qaybaha 14 iyo 15; Luukos qaybaha 22 iyo 23; Yooxanaa qaybaha 12 ilaa 19.
Iiddee cusub oo xusuus ah buu Ciise bilaabay?
Waxyaalahee baa dhacay dhimashadii Ciise kahor?
Siday ulajeeddada Yehowah u dhacdo Ciise inuu dhinto muhim bay ahayd. Maryan waxay ku uuraysatay ruuxa quduuska ah ee Ilaahay sidaa daraaddeed Ciise isagoo kaamil ah buu dhashay oo ma dhiman lahayn. Laakiin noloshiisa wuxuu u bixiyay siday binuʼaadanka u helaan fursad ay weligood ku noolaadaan. Markaasna waxay ku raaxaysan karaan noloshii uu Aadan dhashiisa ka lumiyay markuu caasiyoobay. *—Matayos 20:28; Luukos 1:34, 35; Yooxanaa 3:16, 36; 2 Butros 3:13.
^ qayb. 15 Sidaad wax uga akhrisatid qiimaha noloshuu Ciise allabari u bixiyay eeg Casharka 4aad oo buugga War Wanaagsan Ilaahay Ka Yimid!
Wadaag Wadaag Ciise Masiix Waa la Dilay